दाताबाट ३६७ भेन्टिलेटर प्राप्त - Naya Pageदाताबाट ३६७ भेन्टिलेटर प्राप्त - Naya Page
काठमाडौं, १३ असार । कोभिड महामारी सुरु भएपछि विभिन्न दातृराष्ट्र तथा संस्थाबाट अहिलेसम्म तीन सय ६७ वटा भेन्टिलेटर प्राप्त भएका छन् । सरकारले तीन सय चार भेन्टिलेटर विभिन्न अस्पतालमा पठाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि शिक्षण अस्पतालमा पाँच भेन्टिलेटर थपिएका छन् । शिक्षण अस्पतालमा भएका ६० भेन्टिलेटरमध्ये २८ वटा भेन्टिलेटर कोभिड उपचारमा छन् । पाँच वटा भेन्टिलेटर बिग्रिएका छन् ।
टेकु अस्पतालमा भएको र सहयोग गरी २१ भेन्टिलेटर पुगेका छन् । ‘अहिले अस्पतालमा भएका सबै भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् । योभन्दा धेरै सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन,’ निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी भन्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट